Caanaha Geela oo Ugu Nacfi Badan Noocyada Caanaha Adduunka -Daraasad – Beegsonews-Wararka maanta
Home XOGAHA DUNIDA Caanaha Geela oo Ugu Nacfi Badan Noocyada Caanaha Adduunka -Daraasad
Caanaha Geela oo Ugu Nacfi Badan Noocyada Caanaha Adduunka -Daraasad
Jariidada The Gaurdian ayaa faafisay warbixin ku aaddan bedelka caanaha lo’da loo heli karo uu ka mid yahay caanaha geela oo ugu wanaagsan noocyada caanaha suuqa yaalla.
Daraasadda ay jariidadu faafisay ayaa waxaa ku jiray is-barbardhig lagu sameeyay noocyada caanaha, iyadoo la eegayo faa’iidooyinkooda cunno iyo midka suuq ee ay leeyihiin.
Sida ay sheegtay shirkadda “Euromonitor” ee dalka Ingiriiska, waxaa jira noocyo badan oo caano ah oo suuqa yaalla waxaa ka mid ah, caanaha Soy ee laga sameeyo dhirta, caanaha Qumbaha iyo midka Geela iyo labo nooc oo kale oo caano ah oo ay kala ah, Almond iyo caanaha bariiska.
Dr Michalis Hadjikakou oo ka tirsan jaamacadda Deakin University, gaar ahaan kulliyadda sciences, ayaa sheegay in arrintu ay tahay mid dhib badan loona baahan yahay in daraasado badan la sameeyo si loo helo caanaha ugu wanaagsan.
Caanaha Soy waxaa laga soo saaraa dhirta kaymaha Amazon ee roobka badan, iyadoo loo baahanayo in dhul badan la banneeyo si loo beero, halka qiimaha caanahan uu sii kordhayo maadama uu borotin ku ku badan yahay.
Caanaha qumbaha, waa nooca ugu tayada yar, noocyada caanaha, waa sida Dr. uu sheegayo, faa’iidadiisu lama mid ah faa’iidooyinka laga helo caanaha kale.View image on Twitter
A Healthy Body@AHealthyBod
Coconut milk contains beneficial fat called lauric acid, a medium-chain fatty acid that’s easily absorbed and used by the body for energy. http://bit.ly/2NPTHzV 27:31 PM – Sep 17, 2018See A Healthy Body’s other TweetsTwitter Ads info and privacy
Dr Michalis, waxa uu caanaha Geela ku sheegay iney yihiin caanaha ugu macquulsan ee lagu bedelan karo caanaha lo’da, qiimahooda cunno oo aad u sarreeya, geela waxa uu kaga fiican yihiin xoolaha kale ee lo’da ka midka tahay in caanihiisa aanuu methane ku badneyn, sida xoolaha kale ay calafka u cunaan uu kaga duwan yahay.
Previous articleQooys waxyeelo culus kasoo gaartay duqeeyn laga fuliyay Ceel-waaq!!
Next articleMadaxweyne Muuse Biixi Oo U Duulay Imaaraadka Carabta+Sawiro
Daraasad: Daalka Shaqada oo Indha La’aan Keeni Kara!
Oohintu Waxay Daawo U Tahay Caafimaadka Sanka & Indhaha